माधब नेपाल फकाउन पौडेलको बानेश्वरमा चार घण्टा गोप्य भेट, के के भयो सहमति ? – NepalayaNews.com
सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्षको पछिल्लो सम्बोधनले के नेकपा भित्रको संर्घषमा तत्काललाई युद्धविराम लागेको हो ? अथवा २ साउनबाट शुरु हुने बैठकमा फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको विषय मुखरित होलान् ? अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ता नै यो प्रश्नमा अनुत्तरित छन् ।
दुई अध्यक्षको सहमति भलै भयो ल, तर यसमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको टिप्पणी पनि उस्तै हुन्छ या हुदैन? यो प्रश्न पनि उठेको छ । ओली पक्षका नेताहरुको कुरो सुन्ने हो भने कुरा मिलिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैबाट राजीनामा नदिइकनै समस्या समाधान निस्कन्छ । तर प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट नेताहरुले कुनै टिप्पणी यसमा गरिसकेका छैनन् । तर यति भनेका छन्, अब नेकपाको विभाजन टर्यो । पार्टी विभाजन अब कसैले पनि गर्दैनन्, त्यो खतरा चाही अहिलेलाई टरेको छ, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, तर अन्य विषयहरुमा अझै छलफलकै क्रममा रहेकोले समस्या समाधानको सूत्र नै भने टुंगो लगाईसकिएको छैन् ।
नेता पाण्डेले भने नेताहरु काम विशेषले बाटो पर्दा आफ्नो निवासमा बेला बेला छिर्ने भएकोले शनिबार पनि पसेर छलफल गरेको हुन सक्ने मात्र टिप्पणी गरे । तर उनले आफु घर बाहिर रहेकोले पनि जानकारी हुन नसकेको बताए । तर नेपालसँग पौडेलले गरेको यो गोप्य भेटवार्तालाई कतिपय नेताहरुले माधव नेपाल फकाउने रणनीति अन्र्तगतको छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान लगाएका छन् । सफलखबरमा समाचार छ ।
कांग्रेसमा नेतृत्वको वहस सुरुः देउवा र पौडेललाई ‘रिङ आउट’ गर्ने रणनीति !	१८ श्रावण २०७७, आईतवार १४:५९
अमेरिकाको ल्यानिफोर्निया जंगलमा भीषण डढेलो, ८ हजार मानिसले घर छाडे २८ असार २०७७, आईतवार १५:३०
अमेरिकाले ब्रिटेन, फ्रान्स,भारतको अर्थव्यवस्था भन्दा बढी कोरोना राहत वितरण गर्‍यो २८ असार २०७७, आईतवार १५:३०
ट्रम्पले मागे टिकटक विक्रीको हिस्सा २८ असार २०७७, आईतवार १५:३०